सौन्दर्य Archives - नेपाली खोज
१. कागती : कागतीले छालाको रंग हल्का बनाउछ र छालाको गहिराइसम्म सफा राख्न मद्दत गर्छ र अनुहारको दाग हटाउछ । कागतीको रसमा बेसन र काँक्रोको रस मिलाएर ३० मिनेट सम्म अनुहारमा राख्ने र सफा पानीले धूने गर्नाले तपाईको अनुहार गोरो र चम्किलो बन्छ । २. बेसार : काँचो दूधमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले केही दिनमै […]
सुन्दर अनुहारका लागि बेसन कति उपयोगी ?
बेसन अर्थात् चनाको पिठो त्वचाको सौन्दर्य बढाउनमा उपयोगी मानिन्छ । सुख्खा तैलिय तथा बिभिन्न प्रकारका छालाका लागि बेसनको प्रयोग गर्नु फाइदा जनक हुन्छ । १. बेसनको प्रयोगले छालालाई घामबाट बचाउँछ साथै छालामा भएका दाग, डन्डिफोर जस्ता समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ । २. तैलिय त्वचाका लागि बेसन निकै लाभदायी हुन्छ । बेसनमा गुलाबजल र दही […]
झट्ट हेर्दा सबैको आँखा पहिला अनुहारमा नै पर्न जान्छ । कसैको अनुहार चम्किलो रौं रहित हुन्छ भने कसैको अनाबश्यक रौं तथा झुसले शुन्दरतामा बाधक बनिरहेको हुन्छ । अनाबश्यक रौं एकै दिनमा हटाएर चम्किलो र सफा अनुहार पाउन यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ – सामग्री काँचो दूध,तर, बेसार,बेसन बिधि – एक चम्चा काँचो दूधमा थोरै बेसन, एक […]
हरेक युवतीको राम्रो देखिएर हिँड्ने इच्छा हुन्छ युवतीहरूमा को भन्दा को कम हुने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । सुन्दर देखिन कमसेकम धेरथोर मेकअप त गर्नैपर्छ । धेरैजसोले राम्री देखिने होडमा बजारमा आएका नयाँ प्रोडक्ट प्रयोग गरी अनुहारको छाला बिगार्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसकारण हरेक युवतीलाई आफ्नो मेकअप किटमा कुन–कुन प्रोडक्ट सामग्री हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी […]
मान्छेको शरीरमा या अनुहारमा सेतो रङको सानो दाग (पिगमेन्ट लस) आउने समस्या दुबी हो। धेरै मान्छेले यसलाई ‘कस्मेटिक डिस्फिगरमेन्ट’को रुपमा लिने गर्छन् । यो भन्नुको अर्थ शारीरिक सौन्दर्यताको समस्या हो। तर यसले सौन्दर्यतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। छालाको रङ बनाउन रगतको मेलानोसाइट कोषले उत्पादन गर्ने मेलानिन पिगमेन्टले सहयोग गरेको हुन्छ। […]
हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन : जानी राखौ :- १.यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको […]
काठमाडौँ । टिनएज उमेर नै त्यस्तो हो, जुन समयमा हरेक टिनएजर सुन्दर एवम् आकर्षित देखिन्छन् । यो उमेरसँगै सौन्दर्यमा थप ध्यान दिन सकेको खण्डमा त्यो सुन्दरता पछिसम्मका लागि निरन्तर टिकाइराख्न सकिन्छ । टिनएज चञ्चलताले भरिएको उमेर हो । यही बेला उनीहरुको व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौन्दर्यलगायतका हरेक विषयमा सही तरिकाले समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । यो […]
काठमाडौँ । सुन्दर हुने चाहनामा मानिसहरु विभिन्न किसिमका किसिमका साबून प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर यस्ता चिजहरुले अनुहारमा सुन्दरता हैन कतिपयको अनुहारमा कुरुपता थपिदिन्छ । ताकी जसले गर्दा डन्डीफोर आउने चयापोतो जस्तो समस्या हुने गर्छ । त्यसकाण आज हामी गोरो बन्ने केही घरेलु उपायबारे बताउन गइरहेका छौँ । आवश्यक सामाग्री फ्रेस दुध क्रिम बेसन बनाउने […]
काठमाडौं । क्याट्रिनाको सुन्दर र कामुक अवतारलाई मनपराउनेहरूको कमी छैन् । उनको स्लिम, तथा कामुक शरिरले हलसम्म धेरैलाई तान्ने पक्का छ । उनलाई धेरैले आफ्नो ड्रिम गर्लका रूपमा लिने समेत गर्छन् । यिनै नायीका क्याट्रिनाले आफूलाई यसरी सुन्दर र कामुक राख्न के गर्छिन् भन्ने जान्न चाहने पनि धेरै होलान् । उनी जस्तै बन्न चाहने महिलाहरू […]